भावनाले सबै कुरा चल्दैन, जो जहाँ छन्, त्यहीँ रहनुपर्छः उपप्रधानमन्त्री पोखरेल | Ratopati
personरासस exploreकाठमाडौं access_timeचैत १८, २०७६ chat_bubble_outline2
काठमाडौं । सरकारले लकडाउनको समयमा जो जहाँ छ, त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने र सीमानाका भने नखोल्ने भएको छ । भारतबाट नेपाल फर्कन चाहनेसमेत उतै बस्नुपर्ने र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकसमेत भारत फर्कन नपाउने भएका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्ने त्रासका बीचमा दुई देशको सीमानाका बन्द भएको बेला नेपाल फर्कन खोजेका नेपाली नागरिकको सङ्ख्या दशगजा क्षेत्रमा देखिएको बेला नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भावनात्मक कुराका आधारमा मात्रै विपत्तिसँग जुध्न नसकिने बताए ।
रासससँग आज आफ्नै कार्यकक्षमा कुराकानी गर्नुहुँदै कोभिड १९ सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले सीमानाका बन्द भएपछि पनि स्वदेश फर्किन दशगजा क्षेत्रमा जम्मा भएका नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकलाई जो जहाँ छन् त्यही देशको सरकारले व्यवस्थापन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
‘भारतका विभिन्न स्थानमा रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा पुगेका नेपाली नागरिक देश फिर्ताको माग गर्दै आएका छन् । केही नेपाली पौडेर महाकाली नदीसमेत पार गरेर आएका छन् । त्यसबाट कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जो जहाँ छन्, त्यहीँ राख्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो”, मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘भावनात्मक हिसाबले त उहाँहरुलाई फर्कन दिनुुपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक नै हो, तर यो भावना भन्दा परेको विषय हो । विपद्मा जो जहाँ छौँ, त्यहीँ बसौँ ।’
स्थानीय तहले नै कम आय भएका, ज्यालादारी तथा श्रमिक चिन्ने भएकाले विधिअनुसार नै उनीहरुले राहत पाउने र सरकारले उपलब्ध गराउने दृढता व्यक्त गरे । उपप्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका हरेक निर्णय नेपाल र नेपाली जनताको हितलाई केन्दमा राखेर भएकाले कुनै दुविधा नराख्न र गलत मनसाय राख्नेले चलाएको हल्लामा नलाग्नसमेत आग्रह गरे ।
April 1, 2020, 10:18 a.m. Chandra
विदेशमा रहेका नेेपालीहरुलाई पनि स्वस्थ्य परिक्षण गरि नेेपालमा ल्याई अनिवार्य क्वारेण्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्ने तर्फ सरकार प्रमुखले एक अभिभावकको रुपमा सोच्नहुन अनुरोध छ । यदि पर्याप्त क्वारेण्टाइन नभए १५०० जनाको दरले ल्याउने १४ दिने क्वारेण्टाइन सकिएपछि त्यही ठाँउमा अर्काे लट ल्याउने र हवाइटिकट स्वय‍‍‍‌‍म् लाई तिराउन सकिन्छ ।
March 31, 2020, 8:22 p.m. Santosh kgadka
फ्रान्स र जर्मनीले शुक्रबार र शनिबार आफ्ना नागरिकसहित अरु देशका समेत गरी करिब ८ सय नागरिकलाई विमान चार्टर गरेर लगे। अमेरिकाले आज ३०२ नागरिकलाई पनि विमान चार्टर गरेरै लग्यो। भोलि चीनले उतैबाट विमान ल्याएर आफ्ना नागरिकहरुलाई लिदैछ। भोलि नै अष्ट्रेलियाले आफ्नो देशका नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर गरी लिदैछ। बेलायतले पनि छलफल गरिरहेको खबर आइरहेका छन्। विडम्बना ! नेपाली नागरिकहरु आफ्नो देश (घर) फर्किन पाउँ भन्दै महाकाली पारि रोइरहेका छन्। महाकालीमै हाम फालेर आफ्नो देश आएकाले राज्यको पक्राउ खाए। अरु कयौं सिमानामा रोइकराई गरिरहेछन्। देशको सीमासम्म आइपुगेर घर फर्किन नपाएका यी नागरिकहरुका लागि देश हुनु र नहुनुको क्यै अर्थ रह्यो र? हो, हामीसँग प्रश्न छ- उनीहरुसँगै कोरोना भाइरस भित्रियो भने ? यत्रो राज्य छ, राज्यका निकायहरु छन्, तीन तहको सरकार छ। सीमासम्म आइपुगेका आफ्ना नागरिकलाई कम्तीमा १४ दिन क्वारेन्टाइन राख्ने र जबर्जस्ती गर्नेलाई बलप्रयोग गरेर राख्ने व्यवस्था पो गर्नुपर्यो। घर (देश) नफर्क भन्ने ? लकडाउन भन्दैमा 'जहाँ छौ त्यहीँ बस' भन्ने रेडिमेड जवाफले पुग्दैन। पराई देशको सडकमा भएका आफ्ना नागरिकलाई पनि सजिलै त्यहीँ सडकमै बस भनिदिने ? आफ्नो देशको भूगोलभन्दा सय मिटर पर पराईको भूमिमा रोइरहेका नागरिकको आँसु देखेर पनि केही गर्ने सोंच आउदैन भने किन सत्ता, शक्ति, सरकार, प्रतिपक्ष र पार्टी भन्दै फूर्ति लगाउनु? किन देश, जनता, समृद्धि र सपनाका महाभारत पढाउनु ?